လေနုအေး: ကိုပေါနဲ့ အမေးအဖြေ
Posted by တန်ခူး at 9:34 PM
ကြည့်စမ်း... အင်တာဗျုးတွေ ခေတ်စားနေလိုက်တာ..
မြို့မေတ္တာခံယူတဲ့ ကိုပေါရဲ့ မေတ္တာကို ခံယူသွားပါတယ်....။
(ပြီးတော့မှ မိတ်ဆွေကောင်းပီပီ တဖက်လှည့် ပြန်လာပြီး ရေဘောလုံးနဲ့ ပေါက်သွားတယ် ဗြန်းးးးးး ကျောစုတ်လေရော့..:p)
(မတန်ခူးအတွက်တော့ ပိတောက်ပန်းနဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်ပေးသွားတယ်နော်...၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀)
idea အသစ်ပါလား မမ။
ကိုပေါ fighter မှန်း စောကြီးထဲက သိပ။
တန်ခူးအမေး ... ကိုပေါအဖြေပေါ့။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းက ဒီတစ်ခါတော့ အင်တာဗျူးဆရာမပေါ့။ မိုက်ကလေး ကိုင်ပြီး ဗျုးနေတာတောင်မြင်မိသေး။ မှတ်သားစရာ သိစရာအချို့ မှတ်သားသွားပါသည်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေသွားတဲ့ ကိုပေါကိုရော ဗျူးဆရာမတန်ခူးကိုပါ ကျေးဇူး။ တန်ခူးမေးခွန်းတွေ အရမ်းမိုက်တယ်။ ငယ်ငယ်က ပေဖူးလွှာတို့ မဟေသီတို့တွေထဲက စာပေအင်တာဗျူးတွေတောင် သတိရမိသေး၊။မောင်သာနိူးတို့၊ အောင်သင်းတို့ ... ဘလာ... ဘလာ ...
အမတန်ခူးနဲ့ ကိုပေါရေ ကျနော်တော့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသတိရမိတယ်
ညီညွတ်ရေးနဲ့ အသက်ရှည်ရှည်ခင်ခင်မင်မင် လက်ရေတပြင်တည်း ရှေးကထက်ပိုချစ်ကြတယ်....
Some R Juz Black..
U r white, +ive & Productive...
Some are Simply NOT...
U can't Simply Can't CHANGE..!
The above comment makes me remember Michael Jackson's song..
Its black , its white, whoo..."
မမရေ.. ပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး အဟီး.. :D
သင်္ကြန်ဆိုတော့ ရေလာလောင်းတာ.. သားသားရော အမကိုရော ရေလောင်းသွားတယ်နော်.. :D ဒီနေ့ နောက်ဆုံးနေ့မို့ အလုပ်ပါးတုန်းလေး ရေလိုက်လောင်းနေတာ..:P
ဆက်လည်လိုက်ဦးမယ် မရေ.... blog လည်ပြီး ရေလိုက်လောင်းလို့ မပြီးသေးဘူး..:D
စာအုပ်တအုပ်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ဘယ်မှ မရောက်ဖြစ်တာပါ...
ကျနော်တောင် ဗျူးလိုက်သေး...း)
သည်လို အင်တာဗျူးကို ဘလော်ဂါတွေအားလုံးကို လိုက်ဗျူးလိုက်ရင် ပို့စ်တွေ မနည်းဘူး ရမယ်ဗျို့...
Trend လေးတခုလည်း ရနိုင်မယ် ထင်ရဲ့...
BTW နှစ်သစ်မှာ မတန်ခူးတို့ မိသားစုဝင်အားလုံး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျား...
ရှေးကထက် ပိုချစ်ကြစေချင်တဲ့ စိတ်ရင်းခံရှိတဲ့ မတန်ခူးကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။ :)
ကျနော်တော့ကြောက်တယ်း) အဟိ နာမည်ကြားတာနဲ့ အဖျားတက်ချင်လို့ ။
အစ်မကြီး နေကောင်းတယ်ဟုတ် ကျနော့်ကိုလည်း ဗျူးပါလား ???
ဒီပို့ စ်မှာ ကျွန်မရဲ့ တင်ပြပုံညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ကျွန်မရည်ရွယ်ချက်တွေ
မှုန်ဝါးသွားရတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီပို့ စ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လားရာတူသူတွေကြား နားလည်မှုတွေ မလွဲစေချင်လို့ ပါ။ မည်သူတဦးတယောက်ကိုမျှ ထိခိုက်နစ်နာလိုစိတ် မရှိဘူးဆိုတာ ကျွန်မကျိန်ဆိုပြောရဲပါတယ်။ ဒီပို့ စ်အတွက် ကျွန်မကို ၀ိုင်းဝန်းစိုးရိမ်ပူပန်ပေးကြတဲ့ ဘလော့ဂ်ရောင်းရင်းများကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ကြိုတင်အသိမပေးပဲ “ငါ့ကို ဒီမေးခွန်းတွေ ဖြေပေးတော့ ကိုပေါရေ”လို့ရက်ရက်စက်စက်၊ မညှာမတာ မေးခွန်းတွေ ပေးလိုက်တာကို အသေအချာဖြေပေးတဲ့ ကိုပေါကို ကျေးဇူးပါ။ လေနုအေးကို လာလည်တဲ့သူတွေ အမြဲအေးမြချမ်းမြေ့ပြီးမှ ပြန်သွားစေချင်တဲ့ ဆန္ဒကြောင့် ကျွန်မ ဘလော့ဂ်နာမည်လေးကို လေနုအေးလို့ ပေးခဲ့တာပါ။ လေနုအေးဆီက လေပူနွေးလေးများ ရခဲ့တယ်လို့ ထင်ရင် ကျွန်မရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း တောင်းပန်ပါရစေ။
ပန်ရေ… ပိတောက်ပန်းလေးကလဲ မွှေး၊ မုန့် လုံးရေပေါ်လေးက ချိုမြနေတာပဲ… ကျေးဇူးပါ…
ညီမရီတာရေ… တကယ်တော့ အမ အတော်ညံ့တာပါညီမရယ်…
ဆွိရေ… အင်တာဗျူးဆရာမတော့ မလုပ်ပါရစေနဲ့သူငယ်ချင်းရယ်…
ရှေးကထက် ပိုချစ်ကြဖို့ပိုလိုလာတယ်လို့ထင်လို့ဒီပို့ စ်ကို ရေးဖြစ်တာပါ မောင်လေးရွာသားလေးရေ…
Anonymousရေ… လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ…
JDရေ… လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ…
နုရေ…အေးလိုက်တာ…ရေခဲရေတွေမိုလား… တို့ လဲပြန်လောင်းလိုက်မယ်…ဗွမ်း….
ကိုအောင်သာငယ်ရေ… ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
ကိုစေးထူးရေ… ကျွန်မရဲ့စိတ်ရင်းခံကို မြင်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ဒီပို့ စ်ဖန်တီးရကျိုးနပ်ပါပြီ….
ညီမလေးပုံရိပ်ရေ… ထပ်တူဆုတောင်းပေးပါတယ် ညီမရယ်…. ကျေးဇူးပါနော်…
မောင်မျိုးရေ… နေကောင်းပါတယ်… ခုဦးထုတ်ကြီးနဲ့ မိုလား…